Ihe nkiri ị ga-ekiri tupu ị gaa Paris iji mara obodo ahụ nke ọma | Akụkọ Njem
Luis Martinez | 09/06/2021 11:49 | omenala, Paris
Ọ bụrụ na ị na-eche maka ihe nkiri ị ga-ahụ tupu ị gaa Paris, ọ bụ n'ihi na ị na-eme atụmatụ njem gaa isi obodo French. Gaghị akwa ụta na oku Obodo Ìhè Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa. Ihe jupụtara na ya bụ ihe ncheta na akụkọ ifo ga-amasị gị, mana ọ bụkwa obodo ọgbara ọhụụ nwere ihe niile ịchọrọ maka ebe a na-agaghị echefu echefu.
Otu ọ dịla, ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Paris na anyị ga-aguputa ị ga-enye gị echiche dị iche nke obodo Seine. Na ha, ị nwere ike inyocha ya tupu ị pụọ n'ụlọ wee chọpụta akụkụ dị iche iche nke, ma eleghị anya, ịmaghịdị adị. Mana nke a abụghị oge ịbawanye, na-enweghị mgbatị ọzọ, anyị ga-atụ aro ihe nkiri ị ga-ahụ tupu ị gawa Paris.
1 Ihe nkiri iji hụ tupu ị gaa Paris, njem nlegharị anya nke obodo ahụ
1.1 The Hunchback nke Notre Dame
1.2 Marie Antoinette, ihe nkiri ọzọ ị ga-ahụ tupu ọ gawa Paris iji mụta banyere akụkọ ntolite ya
1.3 Ndị Miserables
1.5 Amelie, kpochapụwo n’etiti ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Paris
1.6 Ndụ pink
1.7 Ratatouille, onyinye onyinye na ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Paris
Ihe nkiri iji hụ tupu ị gaa Paris, njem nlegharị anya nke obodo ahụ
Ngagharị anyị na fim kacha mma edobere na Paris ga-akpọrọ gị gaa n'oge gara aga ebe ị ga-amụ banyere akụkọ ihe mere eme ha, kamakwa ruo ugbu a, yabụ ị nwere ike ịchọpụta ihe ha bụ ebe ndị ahụ jupụtara na amara nke na-apụtaghị na nduzi ndị njem. Ka anyị jiri teepu anyị na-atụ aro.
The Hunchback nke Notre Dame
Dabere na akwụkwọ akụkọ pụrụ iche Nwanyị anyị nke paris nke ndi uku Victor Hugo, ihe karịrị otu fim e nwere ọtụtụ. Ikekwe nke kachasị ewu ewu bụ ụdị animation nke Disney mere na 1996. Ọ na-akpọghachi anyị azụ n'oge ochie iji kọọ akụkọ banyere hunchback Quasimodo na gypsy mara mma Esmeralda, bụ ndị tinyere aka na nkata nke ịhụnanya, iwe na mmegwara.
Ihe a nile na Notre Dame, ụlọ ụka kachasị atụ na Paris, dị ka etiti. Na nkenke, akụkọ mara mma nke na-enweghị ihe odide ọjọọ nke ewetaworo na nnukwu ihuenyo ọtụtụ oge.
Y’oburu n’icho ihu nsụgharị ya na ezigbo ndị na-eme ihe nkiri, ị ga-enwe ogbi Nwanyị anyị nke paris, site na 1923 ma bụrụ onye nduzi nke Wallace Worsley. Ndị ntụgharị okwu ya bụ Lon chaney dịka Quasimodo na Patsy Ruth Miller dị ka Esmeralda. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ ụda mbipute, anyị na-akwado ihe nkiri nke otu aha gbara na 1956 na Anthony Quinn na ọrụ nke hunchback na Gina Lollobrigida dị ka Esmeralda. Na nke a, ntụziaka bụ French Jean Delannoy.
Marie Antoinette, ihe nkiri ọzọ ị ga-ahụ tupu ị gaa Paris iji mụta akụkọ ihe mere eme
Akụkọ banyere nwunye ọrịa Louis XVI nke France abatawokwa ya na nnukwu ihuenyo otutu oge. Anyị na-agwa gị ụdị nke Sofía Coppola duziri na 2006 kpọmkwem na aha nke Marie Antoinette. Ọ bụ ezie na ọ na-elekwasị anya na ndụ eze nwanyị, ọ bụkwa ụzọ dị ebube Mara Paris na-agbanwe agbanwe na ngwụsị narị afọ XNUMX, ọtụtụ n'ime ihe ncheta ha ka na-eguzo ma ị ga-enwe ike ịhụ ha na njem gị n'obodo.
Ọrụ nke aristocrat na-arịa ọrịa na-arụ site na Kristen dunst, mgbe nke di ya, eze, na-elekọta Jason Schwartzman. Onu ogugu ndi ozo dika Judy Davis, Rip Torn ma obu Asia Argento mezue ihe nkiri nke nwetara a Oscar maka ejiji ejiji kacha mma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe nkiri kachasị elu, anyị na-akwado nke 1939, akpọkwara aha ya Marie Antoinette. Ọ bụ Woodbridge S. Van Dyke na-eduzi ya, onye mmeri nke Oscars abụọ Nri anyasị nke ebubo y San Francisco. Ma ndị ntụgharị okwu, Norma Shearer Ọ na-egwu eze nwanyị, ebe Robert Morley na-akpọ Louis nke Iri na Isii na Tyrone Power na-akpọ Axel von Fersen, onye e chere na ọ bụ eze ahụ hụrụ n'anya.
Mpempe akwụkwọ maka 'Les Misérables'
Dabere na homonicho akwukwo site Victor Hugo, otu n'ime ndị edemede kachasị jide Paris n'oge ya, ewerela ihe nkiri na telivishọn ọtụtụ oge. Ọbụna etinyere egwu dị egwu dabere na egwuregwu ahụ.
Versiondị nke anyị na-ewetara gị ebe a bụ nke Glenn Jordan duziri na 1978 Richard Jordan na ọrụ nke Jean Valjean, Caroline langrishe dị ka Cosette na Anthony Perkins dị ka Javert. N'ime oge ihe nkiri a, anyị na-agba ama maka akụkọ ihe mere eme dị ka Mgbanwe nke 1830 na, n'ozuzu, na ndụ kwa ụbọchị n'obodo Seine nke oge ahụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ dị ka ihe nkiri ihe ị ga-ahụ tupu ịga Paris dabere na ya Ndị Miserables ọzọ, ị nwere ike ịhọrọ nke ewepụtara na 1958. N'okwu a, onye isi bụ Jean-Paul Le Chanois na ndị ntụgharị okwu. Jean gabin, Martine Havet na Bernard Blier.
Nhọrọ nke atọ bụ nke Josée Dayan sere maka telivishọn. Jean Valjean nọchitere anya ya Gérard Depardieu, mgbe Cosette na-egwuri egwu Virginie ledoyen na Javert nke John Malkovich dere.
Ọ bụrụ na fim ndị gara aga gosipụtara gị akụkọ ihe mere eme Paris, Moulin Rouge ọ na-emekwa ka ị mata ọnọdụ bohemian nke obodo na ngwụsị narị afọ XNUMX. Karịsịa, nke ụlọ ọrụ nka nke Montmartre, ebe cabaret a ma ama nke na-enye ihe nkiri aha ya ka dị taa.
Ihe nkiri a bụ Baz Luhrmann duziri ya ma wepụta ya na 2001. Ọ na-akọ akụkọ banyere onye edemede na-eto eto Bekee nke kwagara n'obodo Seine, nke dọtara kpomkwem site na nkà mmụta bohemianism ya. Na Moulin Rouge ị ga-ahụ ezigbo mmadụ dịka onye na-ese ihe Toulousse Lautrec, kamakwa onye egwu egwu Satine, onye ya na ya ga-ahụ n'anya.
Ọ bụ ihe nkiri egwu nke ga-enye gị ozi dị mkpa maka ị chọpụta ógbè Montmartre na ihe ị ga-ahụ ebe ahụ mgbe ị gara Paris. Ma anyị na-adụ gị ọdụ ka ị attentionaa ntị na ụda olu ya dị ike, nke gụnyere ihe kachasị ukwuu site na Queen, Elton John o nirvana.
Amelie, kpochapụwo n’etiti ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Paris
Abụọ Mills abụọ
Ihe nkiri a, nke ewepụtara na 2001, bụ ihe ama ama n'etiti ndụmọdụ cinematographic iji hụ tupu ị gawa Paris. Ọ bụ ihe ọchị ọchị ọchị Jean-Pierre Jeunet duziri ma rụọ ya Audrey tatoo.
Ọ na-etinye onwe ya na akpụkpọ ụkwụ onye na-elekọta nwanyị na-arụ ọrụ na Abụọ Mills abụọ na ọ chọpụtakwara nzube ná ndụ ya mgbe ọ kpebiri inyere ndị ọzọ aka ime ka ha nwee obi ụtọ. Ihe nkiri a meriri César Awards anọ ma họpụta ya maka ọtụtụ Oscars, agbanyeghị na enwetaghị nke ọ bụla. Mana nke kachasị, ọ bụ ihe nkiri na-atọ ụtọ nke rụzuru nnukwu ọhaneze.
O zuru oke ịmara Montmartre, ebe cafe ebe Amelie na aru oru di. Mana, n’adịghị ka nke gara aga, agbataobi anyị hụrụ n’ime ya bụ nke dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị gaa Paris, ị nwekwara ike ị haveụ ihe ọ atụ drinkụ na Café de Los Dos Molinos.
Onye ọbụ abụ Edith Piaf
Ọ bụrụ na France n'ozuzu ya na Paris karịsịa nwere akara na ụwa nke abụ, ọ bụ Edith Nwachukwu, onye amuru n’obodo Seine. Ihe nkiri a na-akọ, kpọmkwem, ndụ nke onye ọbụ abụ site na nwata ya na mpaghara dara ogbenye nke nnukwu obodo ahụ ruo mgbe ụwa meriri.
Olivier Dahan duziri ya, ọ malitere na 2007. Mana, ọ bụrụ na ihe dị iche na ya, ọ bụ arụmọrụ dị egwu nke Marion Cotillard na ọrụ nke onye ọbụ abụ. N'ezie, o nwetara Oscar maka nwanyị kacha mma maka arụmọrụ ya, na mgbakwunye na ọtụtụ nyocha ndị ọzọ.
Isonyere ya na ndi nkedo bu Gerard Depardieu dika Louis Leplée, onye na-egwu egwu egwu nke choputara Piaf; Clotilde Courau dị ka nne nke onye na-ese ihe na Jean-Pierre Martins dị ka onye ọkpọ ọkpọ Marcel Cerdan, bụ onye ji ịhụnanya jụọ abụ diva.
Ratatouille, onyinye nke ihe nkiri na ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Paris
Dị ka ị maara nke ọma, Paris abụwo ọnọdụ nke iri afọ nri kacha mma n'ụwa. Ihe nkiri a dabere na nke a, nke anyị ji kwụsị njem anyị na fim iji hụ tupu anyị agaa Paris.
Remy bụ oke nke na-abịa n'obodo Seine iji mezuo nrọ ya nke ịbụ nnukwu onye isi nri. Iji mee nke a, ọ webatara n'ime Glọ oriri na ọ Gụ Gụ Gusteau, nnukwu arụsị ya. N’ebe ahụ, ọ ga - ejikọ igwe na - asacha efere iji mepụta ofe kachasị mma na Paris niile. Otua ka ihe eji amalite ihe banyere igwe nkpiri.
Ọ bụ ihe nkiri nkiri nke Pixar mepụtara ma wepụta ya na 2007. Ọ bụ ezie na onye nduzi ya ga-abụ Jan Pinkava, o mechara mee ya Brad Bird na, n'ihi na dubbing, o nwere ihe nkiri nke ogologo Peter O'Toole na onye nto ochi Patton Oswalt. Ọzọkwa, n'etiti ọtụtụ onyinye ndị ọzọ, o nwetara Oscar maka ihe nkiri kachasị mma. N’ikpeazụ ọ magburu onwe ya echiche nke elu igwe site na Paris nke a pụrụ ịhụ n'otu n'ime ihe nkiri ya.
Na mmechi, anyị atụpụtala ụfọdụ ndị ihe nkiri iji hụ tupu ị gawa Paris iji mara isi obodo French nke ọma. Agbanyeghị, a na-atụ aro ọtụtụ ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, Charade, na Audrey Hepburn na Cary Grant na-agagharị n'akụkụ mmiri Seine; Paris, paris, bụ ndị ndị na-akwado ya na-eme ihe nkiri na obodo iji gosi egwu ha, ma ọ bụ Enweghi ike ikwatu, nke gosiputara anyi uru nke enyi, kamakwa nhụsianya nke agbata obi na-arụ ọrụ na mpaghara obodo ahụ. Na, mgbe ị na-aga, ịgagharị na Obodo nke Ìhè, ị nwere ike ịgụ Akụkọ a anyị ndụmọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » Ihe nkiri ị ga-ekiri tupu ị gaa Paris